I-Apple ihlehlisa ukumiliselwa kweCarPool Karaoke | Ndisuka mac
I-Apple ihlehlisa ukumiliselwa kweCarPool Karaoke
Uthotho lweTV oludalwe yinkampani esekwe eCupertino ayizukuphuma, njengoko kulindelwe, entwasahlobo, kodwa iyakulibaziseka ngokungenakulungiseka. Oku kutyhilwe ngu-Apple namhlanje. Ngelishwa, umboniso weCarPool Karaoke yenziwe licandelo elitsha le-Apple, isenokungafumaneki ngexesha ebelimiselwe ekuqaleni.
ICarPool Karaoke yayicwangciselwe ukuba itsibe izikrini ngale nyanga ka-Epreli. Nangona kunjalo, iingxaki nge isikhathi lomboniso uyakunyanzela ukukhutshwa kwawo kulibaziseke kude kuphele lo nyaka.
Nangona izizathu ezichanekileyo zokuba la maxesha amiselweyo azange zifezekiswe azichazwanga, uApple uthumele izaziso kumajelo eendaba aphambili ekwazisa oko "ICarPool Karaoke: Uthotho" Iya kuqala kwi-Apple Music kamva kulo nyaka.
ELe nkqubo intsha sele ithathe inxaxheba kwezinye zokugqibela Iitshixo evela kwinkampani yaseCalifornia. Uthotho / umboniso, oyalelwa ngu James CordenUmhlekisi waseBritane, umbhali wesikrini kunye nomdlali weqonga, sele ebonakele kwindawo yesehlo noTim Cook.
Isiqendu ngasinye soluhlu luza kudibanisa umamkeli omtsha kunye neendwendwe ezivela kwihlabathi lomculo. Imikhosi ibandakanya abalinganiswa abaziwayo abanjengo Shaq, John Legend okanye okuseleyo kwiqela leMetallica.
Ngalo mboniso ulibazisekile ngokuqinisekileyo, Kulindeleke ukuba umboniso wokuqala owenziwe yinkampani yaseNyakatho Melika ube ngowaziwayo Iiplanethi zeeapps, hayi iCarPool, njengoko bekuqikelelwe ngaphambili. Ngokucacileyo, iApple ikwaphuhlisa enye inkqubo esekwe kubomi bomqeshwa wangoku, UGqr Dre.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ihlehlisa ukumiliselwa kweCarPool Karaoke
"Yintoni eseleyo kwiMetallica"? Into eseleyo yeMetallica emva kweminyaka engama-36 ikho liqela eliqala ukhenketho lwayo lweshumi elinanye ngoMeyi ukukhuthaza icwecwe labo lakutshanje elithi "hardwired to self destruct" ngokusoloko kuthengiswa ii-outs ngalo lonke ixesha benyuka eqongeni. Abafana abane abasaphilayo kwaye bekhaba kakhulu.